Xildhibaano sheegay in warqada Mahiga ay aheyd meel ka dhac | raascasayrmedia.com
← Faah faahin kasoo baxaysa kulankii Mas’uuliyiinta DKMG iyo Mahiga
Maxakmadda dambiyada culus ee Puntland oo riday xukuno kala duwan →
Xildhibaano sheegay in warqada Mahiga ay aheyd meel ka dhac
Mudanayaal ka tirsan barlamanka ayaa ka digay shir ay soo qab qaban qaabisay Qaramada Midoobay oo loodanayo in uu ka dhaco dalka Kenya kaasi oo la’isugu yeeray Maamulka goboleedyada ka jira dalka iyo Mas’uuliyiinta dowladda KMG Soomaaliya.
Kadib markii shalay uu safar gaaban ku yimid Magaalada Muqdisho Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsanarimaha Soomaaliya Ambassador Augustine Mahiga islamarkaana uu waraaqado Casuumaad ah uu siiyay Madxda ugu sar sareysa dowladda KMG Soomaaliya ayaa arintaasi waxaa durba meel ka dhac ku tilmaamay qaar ka mid ah Mudanayaasha barlamanka oo kulan ku qaatay Magaalada Muqdisho.
Xildhibaan Cawad Axmed Cashara oo ka mid ah Mudanaayasha barlamanka Soomaaliya ayaa waxaa uu sheegay in waraqada Mahiga uu gaarsiiyay Mas’uuliyiinta ugu saraysa dowladda inay aheyd mid meel ka dhac ku ah Qaranimada dalka Soomaaliya.
Cawad ayaa waxaa uu sheegay in warqadaasi lagu quray in shacabka Soomaaliyeed ay kala fakir duwan yihiin oo aan is xukumi karin, isagoo xusay in Mahiga uu yahay mid doonaya in uu kala qo qobo shacabka Soomaaliyeed oo isku af iyo isku diin intaba ah.
Xildhibaan Cawad Axmed Cashara ayaa waxaa uu u mahadceliyay dowladda Jabuuti oo uu sheegay inay tahay dowladda mar waliba soo bandhigta shirqoolada lala damacsanyahay jiritaanka shacabka Soomaaliyeed.
Sidoo kale Xildhibaan Cabdi Xaashi C/laahi ayaa waxaa uu sheegay in Mahiga iyo Qaramada Midoobay ay doonayaan in Soomaaliya oo horey qabiil qabiil ugu kala qeybiyeen ay iminkana doonayaan inay jufo jufo ay u kala qeebiyaan taasi oo uu tilmaamay in u jeedada ka dambeysa ay tahay in Mahiga uu doonayo in Soomaaliya uu ka dhigto Mashruuc aan dhamaad lahayn.
Hadalka kasoo yeeray Mudanaayshan ka tirsan barlamanka KMG Soomaaliya ayaa uu imaanay xili Maaintii shalay Mahiga uu yimid Magaalada Muqdisho islamarkaana kulamo uu la qaatay madaxda ugu sar sareysa dowladda KMG kuwaasi oo uu ku wareejiyay Waraaqado casuumaad ah oo ladoonayo inay kaga soo qeyb galaan shir lagu wado in uu ka dhaco dalka Kenya.